ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Hyde Group
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၊ AnHui ပြည်နယ်၊ HeFei City တွင်တည်ရှိသည်။ စက္ကူခွက်၊ ဟင်းချိုခွက်၊ အစားအစာသေတ္တာ၊ ပီဇာသေတ္တာ၊ စက္ကူအိတ်၊ ဓါး၊ ခက်ရင်း၊ ဇွန်း၊ ပန်းကန်၊ ပန်းကန်၊ ကောက်ရိုး၊ ကော်ဖီစသည်တို့ကဲ့သို့တစ်ခါသုံးစက္ကူထုပ်ပစ္စည်းများနှင့် Biodegradable Tableware များကိုကျွန်ုပ်တို့ကျွမ်းကျင်စွာထောက်ပံ့သည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအမေရိက၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ ရုရှား၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ပီရူး၊ ချီလီ၊ မက္ကဆီကို၊ သြစတေးလျ၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အစ္စရေး၊ UAE၊ စသည်တို့
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE, FCS, SGS, FDA, LFGB, SABER, DIN စသည့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အချို့ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
“ Eco-Frendly & ကျန်းမာရေး”
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထိုသူငယ်ချင်းများနှင့်ရေရှည်နှင့် win-wine စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်သည်။
Eco-Friendly & ကျန်းမာရေး။
ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု။ ငါဝယ်သောအိတ်များပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းသောအရာ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုကိုင်တွယ်သူသည်အလွန်ဖော်ရွေပြီးအကျိုးရှိသည်။ သူကထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းငါလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာငါရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အိတ်တွေအကြောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ အိတ်တွေကအချိန်မီရောက်လာပြီးသူတို့ဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာကိုအတိအကျကြည့်လိုက်တယ်။ အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီ!
စီးပွားရေးလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ချောမွေ့။ အနှောင့်အယှက်မရှိ၊ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ထံတင်ခဲ့သောနမူနာတစ်ခုလိုအပ်သည်၊ အချိန်မီရောက်သည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ မကြာခင် order ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်
ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတုံ့ပြန်မှုအံ့သြဖွယ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုပြည့်စုံခြင်း၊ အချိန်မီပေးပို့ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များသည်အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ဒီကုမ္ပဏီကိုသေချာပြန်သုံးမှာသေချာတယ်။ ကောင်းပြီ Team!
ကျွန်ုပ်တို့သည် Eco နှင့်ပတ်သက်သောကွဲပြားသောပရောဂျက်များကိုလုပ်ဆောင်လျက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Eco-Friendly နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်